Tag: ụlọ ọrụ na-ere ahịa | Martech Zone
Tag: ụlọ ọrụ na-ere ahịa
Gini bu Onu ogugu Email Emepere ma Pịa-Site na Ọnụọgụ
Tọzdee, Nọvemba 3, 2016 Douglas Karr
IBM Marketing Cloud weputara 2016 Email Marketing Metrics Benchmark Study. Nkwupụta ahụ na-enye data ga-enye gị ohere iji nyochaa mkpọsa email gị gafee 25 mepee, pịa-site, depụta ndepụta na usoro mkpanaka. Tụkwasị na nke a, akụkọ ahụ nwere: Nkọwapụta ụlọ ọrụ na njirisi ọdịdị ala si n'akụkụ ụwa niile ojiji Ngwaọrụ, usoro ezumike, ozi ịntanetị azụmahịa na ọnụego ntinye aka Benchmarks karịrị "nkezi," gụnyere ndị na-eme n'etiti na ndị na-arụ ọrụ kachasị elu iji data a na omume kachasị mma iji meziwanye. email gị
14 Na-eweta nsogbu na ublọ Ọrụ
Wenezdee, Machị 4, 2015 Douglas Karr
Ebe ọ bụ na anyị na-arụ ọrụ n'ụlọnga nke anyị na-enyere ụlọ ọrụ teknụzụ azụmaahịa aka, anyị maara ihe niile maka ule na mkpagbu nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ. Dị ka a boutique gị n'ụlọnga, anyị nwere uru na anyị nwere ike ịbụ nnọọ picky na anyị na ndị ahịa. N'akụkụ nke ọzọ, anyị na-alụ ọgụ n'ihi na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ achọghị ịkwado ụlọ ọrụ ọzọ na ngwakọta ahịa ha. Anyị enweela ụfọdụ egwuregwu ọchị n’ebe ndị ahịa na-agba aka mgba na ụlọ ọrụ anyị nọ. Ma na niile
Aw, heck. Echere m na m ga-amalite ahịa ahịa!
Kedu ihe ị ga - enweta mgbe ị gwakọtara ọnụ ọgụgụ dị elu nke enweghị ọrụ na ndị gụrụ nnukwu akwụkwọ (ụfọdụ na - ekwu na agụmakwụkwọ gụsịrị akwụkwọ)? N'ezie, ndị ọkachamara. Ọtụtụ n'ime ha. Ka emechara, ma ọ bụrụ na ị na na na na na na na na na na na na ahịa nke 25 afọ ebe ị nwere ihu ọma iji nwere gị n'ọrụ na-akwụ ụgwọ ka ị na-a "nwe nke azụmahịa nchịkwa" tupu ha akwụsị ịkwụ gị kpam kpam… onye ka mma na-agba ọsọ a ahịa ike ! Enwere a egwuregwu na-agba ọsọ na
Otu ihe dị ukwuu gbasara ịzụ ahịa na ntanetị bụ na ọrụ gị zuru oke maka ụwa ịhụ. N'iburu eziokwu ahụ bụ, ọ na-eju m anya ihe ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, yana gọọmentị mpaghara anyị na-eche mgbe ha na -go ọrụ maka enyemaka. Ọ dị ezigbo mma ịkwado ndị ọkachamara n'ịntanetị gị: Ọ bụrụ na ịchọọ ụlọ ọrụ Search Engine Optimization firm, kwụsị ịchọ! SEOlọ ọrụ SEO kachasị mma bụ ụlọ ọrụ ndị na-